Hollywood Psychics Review - Ọgụgụ ọgụgụ isi n'ịntanetị
Ịgụ akwụkwọ ọgụgụ mmụọ nke oge a > Nyocha Omume nke Hollywood
Ihe omuma nke Hollywood Psychics
Ntughari mmeghe dị mma: Nkeji atọ nkeji n'efu na $ 1 kwa nkeji ruo ihe ruru 30 nkeji
Na-enwe obi ụtọ inwe "iwu nkwụghachi azụ kachasị mfe," na-enye nhọrọ nke nkwụghachi ma ọ bụ akwụmụgwọ ma ọ bụrụ na i meghị afọ ojuju
Usoro mmemme nke "Ugboro ugboro": Ndị ahịa mgbe niile na-enweta ego ole na ole
All psychics ga-egosiputa akwụkwọ nyocha abụọ site na ndị ọrụ tupu e goro gị
Mkparịta ụka ekwentị na ntaneti n'ịntanetị dị
Otutu isiokwu di iche iche di iche iche di na nkpisi aka gi
Ndị nlekọta na-enyocha ntụle site na iche iche na ịgakwuru ndụmọdụ
Gwa onye ọrụ ahịa site na ekwentị 24 / 7
Ọrụ site na kamera adịghị adị n'oge ahụ
Mgbe ntinye mmeghe na-agwụ, ihe ọ bụla ọgwụgwọ bụ $ 5 kwa nkeji, nke abụghị ọnụ ala karịa ebe ahụ
Enweghi ike ịgụta ozi ederede E-mail n'egbughị oge
Ihe Omume nke Hollywood anaghị ewere onye ọ bụla na-agụ banyere ndị mmụọ ọjọọ ma ọ bụ ndị na-agụ achịcha na-achọ ịmepụta ụlọ ahịa, dị ka saịtị ndị ọzọ. Ndị chọrọ ịrụ ọrụ maka ụlọ ọrụ a ga-ejupụta ngwa ngwa, wee nyefee otu onye na-arụ ọrụ akwụkwọ abụọ. Naanị mgbe ahụ ka ha ga-abata n'ụgbọ iji nye ọrụ ọgụgụ isi na ịgụ nri maka ndị ahịa nke ụlọ ọrụ a.
Maka na ha anọghị na-azụ ahịa dị ka ebe ụfọdụ na saịtị ha ma ha na-anwa ịmekwu nhọrọ na ndị ha na-akwụ ụgwọ, ị nwere ike ịchọta dị ka nnukwu ọdọ mmiri nhọrọ dị ka saịtị ndị ọzọ. Ma mma karịa ọtụtụ, nri?
Ịhọrọ otu a pụrụ ịdabere na ya na ezi uche
A na-anwale onye ndụmọdụ ọ bụla nwere ike ịmalite ịghọ onye Hollywood Psychic, yabụ na ị ga-ahọrọ ihe kachasị mma site na iji nchịkọta otutu ha nyocha usoro. Kọwaa nhọrọ gị site na ịgụ ihe ndị dị ka kaadị tarot ma ọ bụ astrology. Ị na-achọ onye na-ajụ ihe, ọmịiko, ma ọ bụ ọbụna nwa anụ ahụ? Nsogbu adịghị. Naanị nyochaa nsonaazụ gị. Ụfọdụ ndị na-adụ ọdụ na-ahụkwa ụfọdụ isiokwu, dịka okwu metụtara mmekọrịta ma ọ bụ ọrụ na ego. Ihe nyocha nke Hollywood 'nke di elu bu ufodu nime ihe kachasi nma ayi huru na ebe onu ogugu ndi mmadu.
Ị nwere ike ịzụta ihe ruru 30 nkeji okwu maka naanị $ 1 kwa nkeji dịka nkwụnye mmeghe gị, nke bụ otu n'ime onyinye kachasị mma nke saịtị ọ bụla na-agụ akwụkwọ. Ọtụtụ ndị ọzọ na-enye ọnụahịa ntinye nke yiri ntanetị, na-enwekarị nke kachasị elu na nkeji ị nwere ike ịzụta na ọnụego dị ala.
Mgbe mbu ego gị, ọnụ ọgụgụ ị gụrụ bụ $ 5 kwa nkeji. Ihe Omume nke Hollywood na-enyekwa usoro mmeghe nke ndị ahịa, nke a na-akpọ Perks Perman. Maka akwukwo ọ bụla 10 kwa ọnwa nke ọ dịkarịa ala minit 10, ị ga-enwetatụ ego nkeji ego ise, ruo oge free 15 kwa ọnwa.
Ị nwere ike ịhọrọ ederede ọgụgụ isi site na ekwentị, ma ọ bụ kparịta ụka na onye ndụmọdụ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe nwere uche karị. Ihe Omume nke Hollywood ugbu a adịghị enye mkparịta ụka kamera, nke ga-enye ohere ka ọ bụrụ na ọ ga-adịrị ya mfe. Ha adighi enye akwukwo mmuta uche. Otú ọ dị, ịgụ akwụkwọ email nwere ike dị oke ikikere dị ka ike ịzaghachi ma ọ bụ jụọ ajụjụ ndị na-enweghị ịzụta nzigharị ozi ọzọ.
Ihe profaịlụ Psychic nwere ihe ndekọ nke ndị na-agụ akwụkwọ ọgụgụ isi, n'ihi ya, ị nwere ike ịhụcha onye ndụmọdụ tupu ịzụta ndụmọdụ.
Imirikiti ọrụ nlezianya ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ akaụntụ gị ma ọ bụrụ na i nweghi afọ ojuju, mana Ihe Omume nke Hollywood ga-akwụghachite ego gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Iji nweta nkwụghachi ahụ, ị ​​ga-agbaso ụkpụrụ nduzi ole na ole, dị ka ịkpọtụrụ ọrụ ndị ahịa n'otu ụbọchị ịgụ. Ọ ghaghị ịbụ maka akwụkwọ a na-akwụ ụgwọ na-adịbeghị anya, ebe ọ bụ na ha enweghị ike ịkwụghachi gị maka ịgụgụ n'efu.
Ọ bụrụ na enweghi afọ ojuju na otu n'ime akwụkwọ mbụ ị na-agụ, tụlee ị nweta akaụntụ azụmụgwọ iji gbalịa ịgwọ ọrịa ọzọ. Mgbe ụfọdụ, ndị na-agụ akwụkwọ psychics na ndị na-agụ nri anaghị eme njikọ n'oge mbụ. Site n'ekwenye dị mma dị otú ahụ, ọ nweghị nsogbu ọ bụla ị na-eji ego akwụghachi azụ n'ọdịnihu.
Ihe Omume nke Hollywood na-enye ndị ọkachamara nchịkọta nke ndị na-ahụ maka nkà mmụta uche na ọnụahịa ndị na-abaghị uru mgbe nkwụsịtụ mmeghe gị kwụsịrị, ma ha na-enye gị oge nke mmesapụ aka iji nwalee ọrụ ahụ na $ 1 kwa nkeji .Ma ọ bụrụ na ị nweghị obi ụtọ, a dịghị amanye gị enweta ego, ma enwere ike ịkwụ ụgwọ gị. Ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara itinye aka na ya.
Ihe Omume nke Hollywood anaghị ewere onye ọ bụla na-agụ banyere ndị mmụọ ọjọọ ma ọ bụ ndị na-agụ achịcha na-achọ ịmepụta ụlọ ahịa, dị ka saịtị ndị ọzọ. Ndị chọrọ ịrụ ọrụ maka ụlọ ọrụ a ga-ejupụta ngwa ngwa, wee nyefee otu onye na-arụ ọrụ akwụkwọ abụọ.